Chitima kufamba Italy blog
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Vatariri kwese nguva dzose chinoshamisa uye isu kuzviita kuwana maguta yakanaka, nhoroondo imwe nyika kana tsika dzakasiyana chaizvo needu. zvisinei, haufaniri kuenda kure nomusha kuwana nzvimbo yakanaka. There are a few European train tours…
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi Chimwe chinhu chakanaka kwazvo chine Italy sezvo kuzororo nzvimbo iri kuti haisi chinhu uchingoda muvare bvudzi rako mugomo mazita. Unogona kudzokera Italy zvakare uye zvakare uye vachiri vasina kukwana uyu nyika wakajeka uye ayo richinaka fares, nor…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi With dzakawanda yakakwirira Profiles, aisimbisa nyika vakaita France, Jerimani, uye Switzerland, hazvishamisi Austria haina kuwana nzeve zvikuru! Ok, Italy kumbogara dzadonha mepu, asi chitima nzira kubva Austria kuItaly chokwadi kwave yaregeredzwa. asi, that’s about to…